प्रदेश ५ ले भोली मुख्यमन्त्री पाउने, यस्तो हुनेछ मन्त्रीमण्डल « Light Nepal
प्रदेश ५ ले भोली मुख्यमन्त्री पाउने, यस्तो हुनेछ मन्त्रीमण्डल
Published On : 13 February, 2018 8:53 pm
बुटवल, १ फागुन । प्रदेश नम्बर ५ ले फागुन २ गते मुख्यमन्त्री पाउने भएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रले एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन पत्राचार गरेपछि प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले बुधबार नियुक्ती दिदैछन् ।
बुधवार मुख्यमन्त्रीको नियुक्ती पाउने पोख्रेलको शपथ बिहिबार मात्रै हुदैछ । फागुन ३ गते शपथ ग्रहणको तयारी भइरहेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । शपथ ग्रहणमा प्रदेश ५ का प्रतिनिधिसभाका सांसद, स्थानीय तहका प्रमुख लगायतलाई आमन्त्रण गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीको शपथसंगै तीन सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने तयारी गरिएको एमाले प्रदेश नं. ५ का प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले बताए ।
प्रदेश नम्बर ५ मा पहिलो चरणमा सात मन्त्रालय हुने भएका छन् । मुख्यमन्त्री सहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय एमालेले सम्हाल्ने सहमति भएको छ । माओवादी केन्द्रबाट संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै मन्त्रीपरिषद् सहभागि हुने बताइएको छ । तर माओवादी केन्द्रले मन्त्रीको विषयमा टुंगो नलागेको माओवादी केन्द्रका प्रदेश नं. ५ का प्रमुख सचेतक दधिराम न्यौपानेले जानाकारी दिए ।
पहिलो पटक विस्तार हुने मन्त्रीपरिषद्मा दुबै पार्टीबाट एक÷एक जना सहभागि हुनेछन् । मन्त्रीमण्डलको थप विस्तार भने केही समय ढिलो हुने नेताहरुले बताएका छन् । पूर्वाधार विकास नभइसकेकाले तत्कालै मन्त्री परिषद विस्तार नहुने नेताहरुले बताएका छन् । दुबै पार्टी भित्र मन्त्री बन्ने आकांक्षीको लामो सूचि बनेको छ । प्रदेश नम्बर ५ मा तीन वटा मन्त्रालय मात्रै स्थापना गरिएका छन् । मुख्यमन्त्रीको आवासगृह तयार भए पनि मन्त्रीहरुको टुंगो लागिसकेको छैन् ।